Laba arrimood oo sababay inuu baaqdo shirkii xalka gaarista doorashada ee ay ku baaqeen Axmed Madoobe & Deni.
January 31, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo dhiggiisa Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo magacaabay min 8 xubnood oo labada maamul ku matali doona guddiyada doorashooyinka Soomaaliya ee heer dowlad goboleed.
Madaxweynayaasha labada maamul oo dhaliilsanaa qaabka dowladda Soomaaliya wax u waddo iyo fulin la’aanta qodobadii lagu heshiiyey dhammaadkii 2020 ayaa tallaabadaan qaaday kadib dammaanad qaad ay ka heleen wakiilada beesha caalamka oo Qaramada Midoobey hormuud u tahay.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo ka dhex shaqaynayey hoggaamiyayaasha Soomaalida ayaa u sheegay labada madaxweyne in Villa Somalia ka qaybgalka shirarka doorashada ku xirtay inay soo dhammaystiraan guddiyada doorashada taasi oo ay ka aqbaleen waxaase ay soo jeediyeen in la qabto shir deg deg ah oo looga arrinsanayo doorashada.
Shirka oo la rabey inuu dhoco maalmaha ugu dambeeya ee bisha January ayaa baaqday waxaana loo sababeeyey laba arrimood oo kayimid dhanka dowladda federalka ah ee Soomaaliya, waxaana ay kala yihiin.
1: Wasaaradda arrimaha gudaha Somalia oo diidey aqoonsiga guddiyadii ay soo dhiseen labada maamul sheegtayna inay marka hore yimaadaan xafiiska Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
2: Iyo go’aankii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku saxiixay mooshinka 13-ka Mudane ee aqalka sare ee Soomaaliya loogu biirin doono gobolka Banaadir taasi oo keenaysa in doorashada Soomaaliya mudadeedu dheerato.
Ugu dambayntii waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iclaamiyey shir ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb kadib kulamo uu la qaatay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
Madaxwayneyaasha Jubaland Iyo Puntland waxay ciyaareen siyaasad xirfadaysan oo ini fargaajo ku noqotay laf dhuun gashay, waxayna caalamka tuseen ini fargaajo inuu yahay qaswade doonaya inuu boobo doorashada dalka, wax walbaana ay isaga ka socon la yihiin.
Nuuraani. Waad iska hadashay. Labadan iyagaa looyaqaana qaswadayaal. Caqli iyo siyaasadda midna ma ahayaan. Qofku haduu masuuliyad uu San qaban Karin ku Ardo sidaas oo kale ayuu ugu jaahwarera.
Hadde 13 senator kumaba jidhin heshiiski de!
Shirkana waa lagu cadaadiyey labada qoloba!
Waxaase Xuseen kaa maqan xirfada qoranimada
Si macquul (logic) ah dadka loogu soo gudbiyo!
Sababaha aad sheegtay kuma imaan shirkan loo
Balansan yahay ee waqtiga( time factor) iyo ismariwaaga
ayaa keenay ee wll wax ka baro siyaasada wadankaaga amaba
Tuuji caqligaaga waa hadii aadan dhinac u janjeedhin!
Kuwa isku caaya boggan oo Xuseen kubada garoonka u dhigay
De isku xishooda oo waxaad falanqeysaan ma jidhaan, Samareeb
Waxaa ka soo bixin Allaha og waa calool gacan ku jidha haku degdegina.